Sintomy ny magazine Asterix: tantara an-tsary, hetsika ary lalao | Famoronana an-tserasera
Iray volana lasa izay dia nandao antsika i Uderzo lehibe ary androany dia tonga izy magazine Asterix maimaim-poana hanomezana tombony ny viriosy ao amin'ny orinasa Obélix. Tsy te halahelo ny fotoana mety hitondrana ny tantara an-tsary Asterix mahafinaritra sy mampiala voly ho ankafizinao izy mianakavy.
Tolo-kevitra mahaliana iray izay tsy tianay esorina amin'ny Creativos Online ary miaraka amin'izany izahay te-hanohy hizara atiny izay handany tsara kokoa amin'izao andro izao. Tsy misy fomba tsara kokoa noho ny ataovy mifampikasoka amin'ireo tarehin-tsoratra roa an'ny Uderzo lehibe ary hahafahanao misintona maimaimpoana amin'ny findainao, tablette na PC anao.
Araka ny nolazain'izy ireo, ao amin'ny tanànan'i Asterix, ny tanjona dia mijanona ao an-trano hiaro amin'ny otrikaretina ary hikarakara izay marefo indrindra. Ny tantara an-tsary nataon'i Asterix sy Obélix dia tonga mba hahatonga antsika hifalifaly amin'ny tantaran'izy ireo mahatsikaiky sy fialamboly hafa mba hahafahan'ny fotoana mandeha haingana be.
Irreducible miaraka amin'i Asterix no isa maimaimpoana izay anananao Hetsika asterix, lalao ary tantara an-tsary ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Fotoana tonga lafatra taorian'ny fihaonana 1 volana lasa izay nandao antsika ny iray tamin'ireo mpamorona azy, Uderzo.
Ao amin'ity magazine Asterix ity dia misy ny hafatr'i Falbalá ho an'i Obélix, ny vaovao avy amin'i Pepe the Iberian kely, na avy amin'i Numerobis, Egyptianina. Azontsika atao koa ny manaraka ny zava-nitranga tao Buentorax el Breton sy Guardisuix de Helvecia. Toy ny mety ho fotoana mety hanomezana fotoana tsara ny Romana, amin'ity indray mitoraka ity Asterix sy Obélix dia tonga hanome daroka ny coronavirus. Aza adino ny fotoana fampidinana ny PDF ary araho izany mba hankafizinao amin'ny maha-fianakaviana anao sy hizaranao ny tantaran'ireo Gaul adala ireo.
Gazety Asterix N.1 - marary mitsika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Azonao atao izao ny misintona maimaimpoana ny magazine Asterix ary inona no manome ny virus tsara ho an'i Obélix